चर्चित मोडल निशा घिमिरेको अवस्था यस्तो, भाइले भन्छन जुस ख्वाएको गलत बास्तबिकता यस्तो रहेछ ! (भिडियो) – Khabar28media
चर्चित मोडल निशा घिमिरेको अवस्था यस्तो, भाइले भन्छन जुस ख्वाएको गलत बास्तबिकता यस्तो रहेछ ! (भिडियो)
चर्चित मोडल निशा घिमिरेको अवस्था यस्तो, भाइले भन्छन जुस ख्वाएको गलत बास्तबिकता यस्तो रहेछ ! (भिडियो हेर्नुहोस्) अन्तिममा छ पुरा हेर्नुहोला !! यो पढ्नुहोस्, कलाकार निशा घिमिरेको उपचारका लागि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई वर्ष अघि कलाकारिता अध्ययन गर्न भारतको देहरादून गएकी उनी सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएकी थिइन्
परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उपचार सम्भव नभएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक बन्दै गइरहेको जनाइएको छ । तेइस वर्षीया निशाको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि नवजीवन परोपकार समाजका अध्यक्ष दुर्गानाथ दाहालले समाजिक सञ्जालमा घिमिरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए । तस्बिरमा निशाको अवस्था दर्दनाकपूर्ण देखेपछि सहयोग गर्नुपर्ने चौतर्फी
आवाज उठ्यो । दाहालले राखेको तस्बिरमा नर्भिक अस्पतालका निर्देशक मेघा चौधरीको नजर पर्यो । चौधरीले निशालाई अस्पतालले ल्याई तत्काल निःशुल्क उपचार शुरुआत गरिन् । अहिले उनको स्वास्थ्य सुधार गर्न लागेरहेको अस्पतालले जनाएको छ । महाँकाल –४, ललितपुरकी निशालाई अस्पतालको उपचार पछि पनि पालनपोषण, हेरचाह र निरन्तर उपचारको
जरुरत पर्ने भएकाले आर्थिक सहयोग सङ्कलन थालिएको छ । कलाकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले अहिले सहयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले निशाको परिवारलाई रु ५१ हजार सहयोग गरेको छ । उनलाई अहिले देश तथा विदेश समेतबाट सहयोग जुटिरहेको छ । उपचारमा थप सहयोगका लागि नवजीवनका अध्यक्ष दाहाल, चलचित्र
कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष मोहन निरौला र निशाका बुवा प्रेमप्रसादका नाममा कृषि विकास बैंकमा खाता खोलिएको छ । दुई वर्ष अघि कलाकारिता अध्ययन गर्न भारतको देहरादून गएकी उनी सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ‘निशा घिमिरे संरक्षण कोष’को खाता नं ०२१०४०१८८३००९०१८ रहेको दाहालले जानकारी दिए ।
चर्चित मोडल निशा घिमिरेको अवस्था यस्तो, भाइले भन्छन जुस ख्वाएको गलत बास्तबिकता यस्तो रहेछ ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
Previous Article निशा घिमिरेलाई हस्पिटलमा अपरिचित ब्यातिले खुवाए जुस, एक्कासी निशा पुगिन भेन्टिलेटरमा !! (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next Article आफ्नै मालीकसँग श्रीमतीलाई कोठामा रं’गे’हा’त भेटेपछि, हेर्नुहोस नेपालमै यस्तोसम्म भयो || (भिडियोसहित)